ဟန်းဂုရွာ: ကိုကို အီးနိုင်းများ သိထားသင့်သည့် လိင်စော်ကားမှု အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (성폭력처벌법 )
ကိုကို အီးနိုင်းများ သိထားသင့်သည့် လိင်စော်ကားမှု အပြစ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (성폭력처벌법 )
ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ ခက်ခက်ခဲခဲ ရောက်လာပြီး မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်ခွင်မှ စောစောစီးစီး ထွက်ခွါသွားကြရတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူငယ်လေးတွေ ရှိပါတယ် ။ အချို့မှာ ထောင်နန်းစံလိုက်ရတဲ့သူတွေရှိသလို ၊ ဆိုင်းငံပြစ်ဒဏ်ကျပြီး ပြည်တော်ပြန်သွားရတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ် ။ လိင်စော်ကားမှုနှင့် ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူငယ်များအတွက် ကျနော် စကားပြန်လုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့ အမှု ဆယ်ဂဏန်းနီးလာပါပြီ ။
- ညအချိန် ကိုရီးယား ပျိုပျိုမေရဲ့ အခန်းထဲဝင်မိပြီး အမှုဖြစ်တဲ့သူ
- ဆောင်ကြာမြိုင်မှာ မကျေနပ်လို့ အမှုဖြစ်တဲ့သူ
- ကားပေါ်မှာ ကျောင်းသူမလေးတစ်ဦးကို နောက်က နှိုက်လို့အမှုဖြစ်တဲ့သူ
- ကာရာအိုကေမှာ ခလေးမလေးကို အနမ်း ဖွဖွလေးပေးမိလို့ အမှုဖြစ်တဲ့သူ
- စက်ရုံမှ ဘဝတူလုပ်သမား ကိုရီးယားမတစ်ဦးရဲ့ ဖုန်းသို့ ကိုယ်လုံးတီး ဓါတ်ပုံ မက်ဆေ့တွေ ပို့ရာမှ ဖုန်းသုံးစွဲခွင့်ပါ ပိတ်ခံရပြီး အမှုဖြစ်တဲ့သူ
- နိုင်ငံခြားသားများကို သဘောကျနေတဲ့ ပေါတောတော ကိုရီးယား ပျိုမေတစ်ဦး နှင့် အပေးအယူတည့်ပြီး ပျော်ပါးခဲ့ကြရာမှာ အခြားလူက တိုင်လို့ အမှုဖြစ်တဲ့သူများ
ကျနော်တို့ ညီတော်နောင်တော်များ လိင် နှင့် ပတ်သက်ပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ်ရအောင် အသိပေးဖို့ လိုမယ် ထင်မိလို့ သည်ဆောင်းပါးကိုရေးဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ လိင်နှောင့်ယှက်(စော်ကား)မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း စသည်ဆိုင်ရာ အထူးဥပဒေ (성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법) ဆိုတာ ရှိပါတယ် ။ ရှေးဦးစွာ လိင် နှောက်ယှက် (စော်ကား) မှုဆိုတာ ဘာလဲလို့ သိထားစေချင်ပါတယ် ။
လိင် နှောက်ယှက်(စော်ကား)မှုဆိုရာမှာ ဒီအမှုတွေ ပါဝင်တယ် -
မုဒိမ်းမှု ၊ ခလေး လိင်ထိပါးမှု (အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်များ လိင်ကို ထိကိုင်ခြင်း ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း ၊ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်စေခြင်း၊ လိင် ဆက်ဆံခြင်း စသည်) ၊ ဓါးပြ မုဒိမ်း ၊ လိင် အရောင်းအဝယ် (ဆောင်ကြာမြိုင်ပျော်ပါးမှု) အမှုများသာမဟုတ်မူဘဲ ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြူဆွယ်မှု ၊ လိင်အကြောင်း ဖုန်းဖြင့်ပြောဆိုမှု ၊ လိင်ကို ခြောင်းကြည့်ခြင်း ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ဖျားမှု ၊ လိင်ပုံများပြသခြင်း ၊ လိင်ပုံများ ဖန်တီး ရာတွင် အသုံးပြုခြင်း စသည်ဖြင့် တစ်ပါးသူက မနှစ်သက်သော အကြောင်းအရာ စသည်တို့ကို ၊ ကိုယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ အမြင်အားဖြင့်ဖြစ်စေ စိတ်ပိုင်းအရဖြစ်စေ အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမှု ။
ဒါ့ အပြင် လိင်(စော်ကား)နှောက်ယှက်ရန်အကြံဖြင့် ဆေးဝါးတိုက်ခြင်းသည်လည်း သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် လိင်နှောက်ယှက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ။
ခလေးသူငယ် သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသူစသည်တို့အား ၄င်းတို့၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိမှု စကားမပြောဆိုနိုင်မှုတို့ကို အသုံးချလျက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံခြင်းတို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း ။
အဲသည်ကျနော်စကားပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့အမှုတွေထဲမှာ ကျနော် စိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံး အမှုကတော့ နောက်ဆုံး (လက်ရှိ စစ်ဆေးနေဆဲ) အမှုပါ ။ ခလေး သူငယ်များ ၊ မသန်မစွမ်းသူများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုရီးယား နိုင်ငံတော်က စီမံပေးထားတဲ့ ဥပဒေ အကာအကွယ်က ကျနော့်ကို စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေခဲ့တာပါ ။ ဥပဒေမှာတော့ -
ပုဒ်မ ၆ ( မသန်စွမ်းသူနှင့် ပတ်သက်သော မုဒိမ်းမှု ၊ လိင်စော်ကားမှုစသည်) ပြဋ္ဌာန်းချက်
(၁) ရုပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသော သူနှင့်ပတ်သက်၍ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၇) မုဒိမ်းမှု ကို ကျူးလွန်သူသည် နှစ်အကန့်အသတ်မဲ့ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ၇ နှစ် အထက်ထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခံရမည် ။
(၂) ရုပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသော သူနှင့်ပတ်သက်၍ အနိုင်အထက်ပြု သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သူအား ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်အထက်ကို ကျခံစေရမည်-
- ပါးစပ် သို့မဟုတ် စအိုအစရှိသည့် အင်္ဂါစပ်မှအပ ဒွါရပေါက်တစ်ခုခု တွင်းသို့ လိင်တန်အား ထိုးသွင်းခြင်း
- အင်္ဂါစပ်သို့မဟုတ် စအိုတွင်းသို့ လိင်တန်မှအပ လက်ချောင်း အစရှိသည့် ကိုယ်အင်္ဂါ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အဆုံး ထိုးသွင်းခြင်း
제6조(장애인에 대한 강간•강제추행 등)
- ① 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처한다.
- ② 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 폭행이나 협박으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람은 5년 이상의 유기징역에 처한다.
- 1. 구강•항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
- 2. 성기•항문에 손가락 등 신체 (성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
ပုဒ်မ ၇ ( အသက် ၁၃ နှစ်အောက် အရွယ်မရောက်သေးသူ နှင့် ပတ်သက်သော မုဒိမ်းမှု ၊ လိင်စော်ကားမှုစသည်) ပြဋ္ဌာန်းချက်
(၁) အသက် ၁၃ နှစ်အောက် အရွယ်မရောက်သေးသူ နှင့်ပတ်သက်၍ (ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၇) မုဒိမ်းမှု ကို ကျူးလွန်သူသည် နှစ်အကန့်အသတ်မဲ့ ထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ၇ နှစ် အထက်ထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခံရမည် ။
(၂) အသက် ၁၃ နှစ်အောက် အရွယ်မရောက်သေးသူ နှင့်ပတ်သက်၍ အနိုင်အထက်ပြု သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ တစ်ခုခုကို ကျူးလွန်သူအား ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထက်ကို ကျခံစေရမည်-
제7조(13세 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 등)
- ① 13세 미만의 사람에 대하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.
1. 구강•항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
2. 성기•항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
ခလေးသူငယ် လိင်နှောက်ယှက် (စော်ကား)မှု ပုံစံတွေကတော့ -
- ခလေးရဲ့ လိင်ကို ထိ ကိုင်ခြင်း
- ခလေးအား လူကြီးရဲ့ လိင်ကို ထိကိုင်စေခြင်း
- ခလေးရဲ့ အင်္ဂါစပ် သို့မဟုတ် စအိုသွင်းသို့ လက်ချောင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်အင်္ဂါရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အဆုံး ထိုးသွင်းခြင်း
- ခလေးရဲ့ ပါးစပ် ထဲသို့ လိင်တန်အား ထိုးသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ခလေး၏ အင်္ဂါအား မိမိပါးစပ်ဖြင့် လျှက်ခြင်း
- လိင်တန်ကို ထိုးသွင်းခြင်း
လိင် နှောက်ယှက်မှု သဘောသက်ရောက်စေနိုင်သော အပြုအမူများကတော့-
- ခလေးကို အသုံးချလျက် ကိုယ်လုံးတီးပုံများ ပြုလုပ်ခြင်း
- ကိုယ်လုံးတီးပုံများကို ခလေးမြင်နိုင်အောင် ထားခြင်း
- ခလေးအား မိမိလိင်ကို ပြသခြင်း
- ခလေးလိင်စိတ် နှိုးကြွအောင် ပြုလုပ်ခြင်း
- လိင်အကြောင်း နားထောင်စေခြင်း
- ခလေးရဲ့ လိင်ကို ကြည့်ရှုခြင်း
ကျနော် လိုက်ပါပြီး စကားပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ နောက်ဆုံး (လက်ရှိ စစ်ဆေးနေဆဲ) အမှုအကြောင်း အနည်းငယ်တင်ပြချင်ပါတယ် ။ ဖြစ်ပုံကတော့ ကိုရီးယားမ တစ်ယောက် ၊ နိုင်ငံခြားသားတွေကို တော်တော်လေး ခင်မင်တတ် ပြီး သံယောဇဉ်လည်း ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။ သည်လိုနှင့် နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ နှင့် တတွဲတွဲပေါ့ ။ မြန်မာလူငယ်များလည်း ဘာသားနှင့်ထုထားတာမှတ်လို့ပေါ့ဗျာ ။
သည်လိုနှင့် မြန်မာ လူငယ်တစ်စု လွန်ခဲ့သော ၆ လ လောက်ခန့်က ပိုက်ပိုက်လေးပေးပြီး ၊ တစ်ည အတူတူ ပျော်ပါးခဲ့ကြလေသည်တဲ့ ။ နောက်တော့ အဲသည် အမျိုးသမီးက အခန်း ခဏခဏလာ ၊ တစ်နေ့တော့ ပိုက်ဆံအိတ်ယူသွားလို့ ဆက်ဆံရေးတွေ ပျက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ခုတော့ သူမမှာ ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိနေပြီ ။ မနေနိုင်တဲ့ တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ယောက်က ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားရာမှာ ကာယကံရှင်က ထွက်ဆိုချက်ပေးရပါတယ် ။ သွေးစစ်တာတွေ ဒီအင်န်အေစစ်တာတွေ အသာထား ၊ ကိုယ်ဝန်ကာလ နှင့် နောက်ကြောင်းပြန် ခန့်မှန်းရက်တွေ အတွင်း အတူတတူ ပျော်ပါးခဲ့သူ စာရင်း ရေတွက်ကြည့်လိုက်တော့ ကံဆိုးသူမောင်ရှင် မြန်မာ လူငယ် ၄ ဦး ထွက်ရှိလာပါသတဲ့ ။ အဲသည် စာရင်းမှာ တစ်ယောက်ကိုတော့ နေရပ်မသိ ဆက်သွယ်ရန် မသိလို့ ရှာမရပေမယ့် ၊ ၃ ယောက်သော သူများကတော့ အခန်းကိုလည်း သိ ၊ ဆက်သွယ်ရန်လည်း ရှိနေလို့ ၊ အခုအခါမှာ လိင်စော်ကား မှုဆိုင်ရာ အပြစ်ပေးခြင်း ဥပဒေနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ ။
ရဲ စွဲချက်မှာတော့ ၊ သူမဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချွတ်ယွင်းသူ(အရူးမ)လို့ဆိုထားပါတယ် ။
အရူးမ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတာမို့ သူမရဲ့ ကာမကိုရယူရာမှာ သဘောတူညီချက်ရရ မရရ ၊ အင်အားသုံးမသုံး အမှုကမြောက်နေပါသတဲ့ ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့တဲ့သူဖြစ်နေတာမို့ ၊ လူမှုရေးအရ သူမကို ကူညီကာကွယ် ပေးရမယ့်တာဝန်လည်း အလိုလိုရှိ နေတယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် စိတ်ပိုင်း မသန်စွမ်းသူဖြစ်နေတာမို့ မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်း ၊ ငြင်းဆန်နိုင်စွမ်း လည်း ချို့တဲ့နေသူမို့ အင်အားမသုံး အကြမ်းမဖက်သည့်တိုင် မသန်စွမ်းသူများဟာ မူလကတည်းက အင်အားချို့တဲ့ နေသူအဖြစ်ကို ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်နေပြီလို့လည်း ဆိုပါတယ် ။
ဒါတင် မကသေးပါဘူး အမှန်အတိုင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းလည်း ချို့တဲ့နေတာမို့ သူမ ပေးခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်ကလည်း သဘောတူညီချက်အထမမြောက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ကာယကံရှင်က အကျိုးအကြောင်း နားမလည်လို့ အမှု တိုင်ကြားခြင်း မပြုသည့်တိုင် ၊ အုပ်ထိန်းသူ သို့မဟုတ် သူမရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့ သို့မဟုတ် သူမ ရဲ့ အကျိုးကို ကာကွယ်ပေးလိုသူ တစ်ဦးဦးက တရားလိုပြုလုပ်ပြီး တိုင်ကြားနိုင်ခွင့်လည်း ရှိနေပါသတဲ့ခင်ဗျား ။
အရူးမပဲ ပေါချောင်ကောင်းဆိုပြီး စိတ်ကူးမလွယ် စိတ်ကူးမလွဲကြစေဖို့ပါ ။
ကလေးသူငယ်ပဲ အရူးမပဲ ဆိုပြီး မလေးမစား မလုပ်ကြစေလိုပါ ၊ သူတို့ရဲ့ အကျိုးလိုလားသူ သို့မဟုတ် သူတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးလိုသူ တစ်ဦးဦး ရှိနေတတ်သည်ကို သတိပြု ဆင်ခြင်ကြဖို့ပါ ။
ကဲ ၊ ကျနော့် ညီအစ်ကိုများ စိတ်မနှံတဲ့ ပေါတောတော ကိုရီးယားမများနှင့် နှစ်ပါးသွားလိုလျင်…………………. ။
Posted by ကိုဝိုင်း (မိုးညှင်း) at 6:25 PM
Labels: ဖတ်စရာ, ဗဟုသုတ, သတင်းဖတ်စာ, အမှုအခင်း, မောင်းသတင်း